Yini i-IBI: izinhlobo ze-IBI nokuthi ungayibala kanjani ekhaya lakho | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | | Izintela
ESpain kunezintela eziningi ezahlukahlukene ezingakuhlanyisa uma kuziwa ekuzikhokheni. Enye yezinto ezaziwa kakhulu, ngaphandle kokungabaza, i-IBI ekhokhisa intela yempahla anayo.
Kodwa, Iyini ngokuqondile i-IBI? Uma ufuna ukwazi konke le ntela engakuthinta, ngaphezu kokwazi ukuthi ungayibala kanjani futhi wazi izinhlobo ezahlukahlukene ze-IBI ezikhona, unganqikazi ukuqhubeka nokufunda imininingwane esikulungiselele yona.
1 Yini i-IBI
2 Ibalwa kanjani i-IBI
3 Ukhokha nini
4 Izinhlobo ze-IBI
4.1 Izakhiwo ezisemadolobheni "ezikhethekile"
I-IBI empeleni iyona Intela Yezindlu, eyaziwa kakhulu ngegama layo. Kuyintela eyimpoqo ekhokhiswa kubunikazi bempahla amalungelo epropathi agcinelwe yona, kanye nokusetshenziswa, indawo engaphezulu kanye nemvume yokuphatha kwizakhiwo.
Ngamanye amagama, kuyisikhundla okufanele sikhokhwe ngokuba nempahla, kungaba yindlu, indawo, ikhaya le-rustic ...
Omasipala baphethe le ntela, yize bengadlulisela abaphathi kwamanye amabhizinisi eqoqo. Njengamanje, lokhu kungenye yaleyo abaphathi bendawo abayithola kakhulu (iyona eletha imali ephezulu kakhulu). Inkokhelo yakho iba minyaka yonke, yize ingahlukaniswa izitolimende eziningana ukuze ungakhokhi konke ngasikhathi sinye.
Ibalwa kanjani i-IBI
I-IBI akuyona into okufanele uyinakekele, ngoba uMkhandlu Wedolobha lapho uhlala khona usuphethe ukusetha inani le-IBI elihambisana nawe futhi likutshele uma kukhona noma yiliphi ibhonasi elizisebenzisayo ngokuzenzekelayo kusabelo sakho.
Ngokuvamile, ukubala i-IBI ukwazi inani le-cadastral lempahla yakho. Lokhu kuza kwi-General Directorate yeCadastre, okuyirejista yomphakathi lapho zonke izakhiwo ezakhiwe zaziwa khona. Kuzovezwa uhlobo lwempahla, izici, indawo ...
Ngokwale datha, leyo mpahla inikezwa inani, inani elibizwa nge-cadastral (elingahlangene nakancane nentengo yemakethe yaleyo mpahla noma nenani lokuhlola). Kuleli nani, uMkhandlu Wedolobha usebenzisa iphesenti futhi umphumela otholakele yilowo okufanele ukhokhwe. Kodwa-ke, kunamabhonasi angenza i-IBI ishibhe kakhulu.
Futhi ungayibala kanjani ngokwakho? Okwakho:
Iya eCatrastro ukuze ucele inani lakho le-cadastral laleyo ndawo.
Iya e-Town Hall yakho ukuthola isilinganiso samaphesenti esisetshenziswa ngokwenani le-cadastral yakho kanye namabhonasi angatholakala.
Sebenzisa lawo manani kunani le-cadastral futhi uzothola imali ezokhokhwa.
I-IBI yinto abanikazi bempahla okufanele bayinakekele. Manje, kunabanye okungadingeki ukuthi bayikhokhele, njengempahla engaphansi koMbuso, izinkampani zendawo noma i-Autonomous Communities, impahla yokuvikela, impahla yeSonto LamaKatolika, iRed Cross, indlunkulu yezokuxhumana noma uma kubhekwa njenge yamafa omlando.
Okunye, kufanele kuhambisane nenkokhelo minyaka yonke.
Kuya ngomasipala, inkokhelo ingenziwa ngosuku oluthile. Futhi, yize kufanele ikhokhwe inyanga yonke, kunezindawo lapho yenziwa khona ngoJanuwari 1, noma esikhathini esiphakathi kuka-Okthoba noDisemba. Ngakho-ke, asikwazi ukukutshela usuku oluqondile lokukhokha, ngoba kuzoncika lapho uhlala khona. Isibonelo, eMadrid, i-IBI ikhokhwa phakathi kuka-Okthoba 1 noNovemba 30.
Le ntela ingakhokhwa kanye noma ihlukaniswe noma ihlehlisiwe. Esimweni esinjalo, nguMkhandlu Wedolobha ongaphakamisa "izinhlelo" ezehlukene zokukhokha i-IBI. Vele, khumbula ukuthi, uma ingakhokhiwe ngesikhathi sokuzithandela, kungahle kube nokukhokhiswa okungafika kuma-20% okwandisa inani elinqunyiwe kakhulu.
Futhi ukhokha kanjani? Kunezindlela eziningi zokukwenza: nge-Intanethi, ngocingo, ngokuqondisa inkokhelo, noma mathupha.
Okuthile abaningi abangakwazi ukuthi i-IBI akuyona intela eyodwa, empeleni, kunezinhlobo eziningana zentela, noma yini efanayo, kuya ngohlobo lwekhaya ongakhokha ngaphezulu noma ngaphansi.
Lokhu, okungaziwa ngabaningi, kuhlobene nokuthi empeleni kunezinhlobo ezehlukene zezindlu. Futhi ngamunye unohlobo oluhlukile lwe-lien.
Ngakho-ke, ungathola okulandelayo:
Izakhiwo nezindawo ezisemadolobheni. Kulokhu, inakekela i-IBI yasemadolobheni, futhi kuyo kufakwa intela engu-0,479% esisekelweni esikhokhiswayo, ngaphezu kokusebenzisa izinzuzo zentela ukuze ikhuphule inani elikhokhiswayo lentela (ngamanye amagama, yini kufanele ukhokhe).
Impahla yemvelo ye-rustic. Lapha kufanele ukhokhe i-rustic IBI, okungukuthi, intela yokuba nendlu ye-rustic (imvamisa, idolobha). Intela yayo iphakeme kunaleyo edlule, engu-0,567%.
Izakhiwo nezici ezikhethekile. Babizwa ngokuthi ama-BICES kanti i-IBI abayikhokhayo inesimo esikhethekile, yingakho intela yabo iphakeme kakhulu kunaleyo eyedlule, i-1,141%.
Izakhiwo ezisemadolobheni "ezikhethekile"
Cabanga ukuthi unendawo edolobheni. Lokhu akusebenzi njengendawo yokuhlala, kepha ukubeka isitolo, indawo yokuphuzela utshwala, ukusebenzisa ezemidlalo, ukuba nehhovisi ... Yebo, i-IBI nayo iyakuqonda lokhu kusetshenziswa, futhi ngaphandle kwentela esishilo ngenhla, Kukhona okunye okukhethekile ngokuya ngokusetshenziswa kwalokhu okuhle.
Ngakho-ke, uthola okulandelayo:
Ukusetshenziswa kwezohwebo. Ukuze wenze lokhu, kuzofanela uyikhokhe lapho inani le-cadastral lingaphezu kwama-euro angama-860.000. Izinga lentela lingu-0,985%.
Ukusetshenziswa kokuzilibazisa nokwamukela izihambi. Inani le-cadastral kumele libe likhulu kune-1.625.000 euros futhi lizoba nentela ka-1,135%.
Ukusetshenziswa kwezimboni. Inani le-cadastral kumele lidlule ama-euro angama-890.000 futhi lizoba nentela ka-1,135%.
Ukusetshenziswa kwezemidlalo. Kuncike ekutheni inani le-cadastral lidlula i-20.000.000 euros. Ukuqamba amanga kwakho? 1,135%.
Ukusetshenziswa kwamahhovisi. Lapho inani le-cadastral lidlula i-2.040.000 euros, inani lentela elizofakwa lizoba yi-1,135%.
Ukusetshenziswa kwesitoreji nokupaka. Uma nje kunenani le-cadastral elikhulu kune-1.200.000 euros, isilinganiso sentela sizoba yi-1,135%.
Ukusetshenziswa kwenhlanzeko. Ukusetshenziswa kwendle, kuzosetshenziswa intela engu-1,135% lapho inani le-cadastral liphakeme kune-8.900.000 euros.
Ukusetshenziswa kwesakhiwo "esisodwa". Kulokhu, inani le-cadastral lizoba likhulu kune-35.000.000 euros futhi lizoba nenani lentela eliphakeme kakhulu, i-1,294%.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Izintela » Yini i-IBI
Ukubalwa kwemali okuyisisekelo